INSTAT-MAHAJANGA : Hanomboka ny Fanadihadiana Maharitra isan-Tokantrano na EPM 2020
Nitsidika ara-pomba fanajana ny Lehiben’ny Faritra Boeny mpisolo toerana Bazezy Clavelah tao amin’ny birao fiasany ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina, ny Alatsinainy 20 Janoary 2020 teo, ny ekipa avy amin’ny Foibe iraisam-paritry ny antontan’isa eto Mahajanga notarihin’ny Taleny, Rakotonjanahary Malala Ny Aina. 22 janvier 2020
Ny anton-dian’izy ireo dia hampahafantatra ny Lehiben’ny Faritra ny fisian’ny Fanadihadiana Maharitra isan-Tokantrano na EPM (Enquête Permanente auprès des Ménages) mikasika ny fiainan’ ankohonana amin’ny ankapobeny. Haharitra 12 volana ity fanadihadiana isan-tokantrano ity. Ny Zoma 17 Janoary lasa teo, tany Antananarivo no nanaovana ny fampahafantarana azy tamin’ ny fomba ofisialy ary samy manatanteraka izany avokoa ireo Faritra 22 eto Madagasikara. Ny Banky iraisam-pirenena no mamatsy vola azy io, ao anatin’ ny tanjona fiadiana amin’ny fahantrana. Lohahevitra maromaro no hanontaniana.
Anisan’zany, ohatra, ny fidiram-bola sy ny fandaniam-bolan’ny tokantrano, ny fampianarana ny ankizy, ny fahasalamana, ny trano onenana, ny fanampim-pivelomana sns…
Ny mba hahafahan’ny mpitondra mandray fanapahan-kevitra ho an’ny fampandrosoana sy mamaly ny zava-misy iainan’ny vahoaka, dia ilaina, hoy ny Lehiben’ny Faritra ny fananana antontan’isa. Vonona hifanome tanana ny Faritra, hoy izy amin’ny zavatra ilaina hampahomby izany, koa manentana ny vahoaka izy mba hanaiky hiara-hiasa amin-kitsim-po amin’ireo mpanao fanadihadiana hanome azy ireo valin-teny tena izy. Marihina fa ny taona 2012 no nanao EPM farany ny INSTAT teto Madagasikara, izay nantsoina hoe « Enquête Périodique auprès des Ménages ». Roa volana ihany ny faharetan’ny fanadihadiana tamin’izany. Ny valin’ny EPM 2012 ary dia namoaka fa mahatratra 71,5% ny tahan’ny fahantrana teto Madagasikara tamin’izany.